Baarlamaanka Puntland oo maanta ansixiyay hindise-xeereedka diiwaan-gelinta cod-bixiyaha – Kalfadhi
February 4, 2021 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada DPL Mudane Gudoomiye Abdirashid Yusuf Jibril oo ay wehliyaan ku xigeenka 1aad Hon. Abdiaziz Abdullahi Osman , ku xigeenka 2aad Mudane Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa maanta shir-guddoominayay fadhiga 26-aad ee Kalfadhiga 47-aad.
Kulanka ayaa maalintii 2aad looga dooday Hindise-Xeereedka Diiwaan-gelinta Cod-bixiyaha.
Hindise-Xeereedka Diiwaan-gelinta Cod-bixiyaha ayaa si faah-faahsan uga hadlaya dadka xaqa u leh is diiwaan-gelinta, habka diiwaan-gelinta, hir-gelinta wacyi-gelinta diiwaanka cod-bixinta, waxa uuna ka kooban yahay 36 Qodob.
Ugu dambeyntii Xildhibaanada Golaha Wakiilada ayaa cod u qaaday Hindise-Xeereedka Diiwaan-gelinta Cod-bixiyaha waxaana u codeyay Ogol 40 Xildhibaan, Diidmo 2, Aamus 0 Mudane.
Guddiga doorashooyinka oo Qaramada Midoobe u caddeeyay in ay diyaariyeen howlihii farsamada doorashooyinka